Inona no Jesosy, dia nanoratra tao amin'ny fasika? | Apg29
Inona no Jesosy, dia nanoratra tao amin'ny fasika?
Ho hitanao ny valiny mahavariana!
Andinin izay nanoratra i Jesosy tao amin'ny tany (dia tany, fa tsy fasika), no ahitantsika ny tantara ny amin'ny vadin'ny olona nandrahona tamin'ny fitoraham-bato ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna.
Jaona 8: 6-8. Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, ka hanan-javatra hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra tamin'ny rantsan-tànany teo amin'ny tany. 7 Ary nony nijanona izy, dia nanontany azy izy, dia nitsangana ka nanao hoe: "Izay tsy nanota dia mety nanipy bato azy voalohany." 8 Dia niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany.
Nanontany aho indray mandeha izay Jesosy nanoratra tao amin'ny fasika ny faty. Ho hitanao ny valiny mahavariana.
Aoka isika hamaky ao amin'ny vanim-potoana rehetra izany mba hahatakatra izany tsara kokoa.
Jaona 8: 2-11
Nony maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray toerana. Ary ny olona rehetra tafangona teo aminy, dia nipetraka Izy ka nampianatra azy. 3 Ary ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo nentina tany amin'i Jesosy ny vehivavy anankiray azo nijangajanga. Dia nataony azy eo anoloan'ny ny 4 ka nanao hoe: "Mpampianatra ô, ity vehivavy ity tratra tao amin'ny asa, rehefa nijangajanga izy. 5 ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izany. Inona no lazainao?" 6 Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, ka hanan-javatra hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra tamin'ny rantsan-tànany teo amin'ny tany. 7 Ary nony nijanona izy, dia nanontany azy izy, dia nitsangana ka nanao hoe: "Izay tsy nanota dia mety nanipy bato azy voalohany." 8 Dia niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany.9 Ary raha nandre izany izy, dia lasa, tsirairay, ny anti-panahy voalohany, ka izy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy nijoro teo. 10 nitraka i Jesosy ka nanao taminy hoe: "Ravehivavy, aiza moa ireny izao? Tsy nisy nanameloka anao?" 11 Dia namaly izy hoe: "Tsia, Tompo ô, no." Hoy i Jesosy: "Izaho kosa tsy manameloka anao. Mandehana, ka aza manota intsony!"
Nasehon'i Jesosy tamin'ny teny sy ny atao
Ao amin'io fizarana Baiboly malaza, izahay efa matetika ihany no nanasongadina tenin'i Jesosy dia milaza fa izay tsy nanota nandatsaka ny vato voalohany, ary avy eo dia nandeha namely noho ny tenin'i Jesosy, noho izy ireo tsy tsy nanana ota.
Fa Jesosy manao ny fanoratana indroa teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tànany mifandray amin'ny izay lazainy.
Izany nanao ny Fariseo sy mpanora-dalàna. Izy ireo fa tsy i Jesosy mistook fihetsiketsehana.
Raha nandre izay nolazain'i Jesosy ka nahita ny fihetsiketsehana, ka fantany tsara ny zavatra tiany hambara. Afaka Bible atiny sy ny ivelany ary nahafantatra izay antony.
"Ireo izay hiala amiko dia toy ny soratra ao amin'ny fasika"
Ao amin'ny Jeremia tao amin'ny Testamenta Taloha ny voasoratra hoe:
Jehovah, Fanantenan'ny Isiraely. Na iza na iza miala anao ho foana. Ireo izay hiala amiko dia toy ny soratra ao amin'ny fasika. Efa nahafoy an'i Jehovah, loharano velona ny rano.
Nasehon'i Jesosy izany asa ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna efa lavo izy ka nahafoy an'Andriamanitra.
Ary Jesosy koa nilaza fa ireo izay tsy manam-pahotana nanipy voalohany vato, tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny hanafaka ny vato, ary mandeha any, satria i Jesosy amin'ny alalan'ny fanoratana teo amin'ny tany izay efa lavo niala tamin'ny amin'Andriamanitra sy nijery toy ny soratra ao amin'ny fasika.
Inona no mitranga mahavadika ny soratra izay efa voasoratra ao amin'ny fasika? Ny blurring ny rano sy ny rivotra.
Comment Jeremia 17:13
Jehovah no Fanantenan'ny Isiraely
Tahaka ny Tompo ny Fanantenan'ny Isiraely, dia ny fanantenana. Efa nandray an'i Jesosy, manana ny hoavinareo sy hanana fanantenana. Raha toa ianao ka tsy nandray an'i Jesosy dia hanao izany dieny mbola tsy tara loatra.
Na iza na iza miala ny tenany ho foana
Tazony hatrany i Jesosy, toy ny andro rehetra hiainanareo. Ary ianao dia indray andro ho voavonjy ny farany an-trano rehefa tonga any an-danitra. Fa nandao azy koa, dia ho menatra. Ary tsy misy olona te-ho menatra?
Ireo izay hiala amiko dia toy ny soratra ao amin'ny fasika.
Izany dia manaitra sy tsy mety resy famaritana izay koa i Jesosy fihetsiketsehana ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna. Fantany avy hatrany ny zavatra nosoratany i Jesosy tao amin'ny fasika rehefa nandrahona hitora-bato ny amin'ny vadin'ny olona, ​​satria nahalala tsara ny zavatra voasoratra ao Jeremia 17:13. Misy vokany goavana ho miala ny Tompo. Mahavadika ny soratra izay efa voasoratra ao amin'ny fasika dia ho voafafa ny rivotra sy ny rano.
Efa nahafoy an'i Jehovah
Nahoana no mitovy ny olona voasoratra ao amin'ny fasika? Noho ny nahafoizany ny Tompo.
Ny loharanon'ny rano velona
Jesosy no ranon'aina. Handray azy dia ny su voavonjy sy hahazo ny fiainana mandrakizay. Handao azy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna nataony. Ny nahafoizany ny loharanon'ny rano velona araka ny Jeremia 17:13, ary avy eo dia tsy nanana fiainana mandrakizay.
V 04, torsdag 28 januari 2021 kl 02:45